စ္ဘီး vs ဖစ္ပါတယ္ရဲ့အရာအကောင်းဆုံးဝတ်စုံသင့်ရဲ့မိသားစု?
ရထားဘီးအဘို့အတက် carpool ရာသီ။ နှစ်ခုရှိပါတယ်နှစ်သက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏နည်းလမ်း။ ဤလန္ႏုိင္သည္။ သူတို့အဘို့အကောင်းမိသားစုခရီးချင်တယ်ဆိုရင်သင်အားဖြင့်ခရီးသွားလာ။ အတွက်နှစ်ဆယ်၊လန္ႏအဓိကဆိုလို၏လမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသုံးပြုကြောင့်အမေရိကန်မိသားစုများ။
အကောင်းဆုံးလအတွင်းသွားဖို့ထိုင်းနိုင်ငံအနေဖြင့်အားဖြင့်မတ်လမှဇွန်လ။ ဒီလယေဘုယျအားပူအောင်အကောင်းဆုံးလအတွင်းသွားဖို့အတွက်ကမ်းခြေ။ ဒါကြောင့်ပျော်မွေ့နွေရာသီသဲသောင်ပြင်မှာအသင့်ရွေးချယ်မှုအဖြစ်တာသင်လုပ်နိုင်အဖြစ်ရှေ့တော်ဒါဟာကျော်ပြီဖြစ်ပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံရှိအချို့အတွက်အကောင်းဆုံးကမ်းခြေလောကရသင့်ကားငှားပြီးမောင်းချဖို့အဆိုကိုအောက်ပါ။
တစ်ဦးကသံသယမရှိဘဲနဲ့၊အလွန်ကြီးစွာသောဓာတ်ပုံများကိုပိုပြီးဖောက်သည်ကိုဆွဲဆောင်။ ယာဉ်နှင့်အတူညာဘက်ဓာတ်ပုံတွေပေးသောအလားအလာဖောက်သည်တစ်ဦးအကောင်းမြင်၏အတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်ယာဉ်များ၏ရပ်တည်ချက်အခွင့်အလမ်းပိုကောင်းမှာကိုငှားရမ်းတဲ့။ သင့်ကားအများကြီးနှင့်ကောင်းမွန်သောပြုပြင်သောအခြေအနေ၊အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအဖို့လူကိုဆွဲဆောင်ဖို့ထိုသို့အားဖြင့်ညာဘက်ကိုယူပြီး။
ဖော်ထုတ်အတိအကျစရိတ်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်၏၊ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုလျော့ချဖို့ဘယ်လိုအားဖြင့်သူတို့ကိုဆက်သွယ်သင့်ယာဉ်ပေါ်အဌားကား။ ကားအလွန်စျေးကြီးထိန်းသိမ်းရန်။ သင်ရှိပါကသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ်သင်-တည်ရှိတွဲဖက်အတူနဂါး။ အချို့အရှင်နှင့်အခြားသူများအကြောင်းသူတို့မြှုတ်မပါဘဲပင်အသုံးပြု။
ကားအဌားကလပ်ဖန်တီးအသုံးပြုသူဖော်ရွေပလက်ဖောင်းစႏိုင္သည္ peer၂peer ကားဝေမျှ။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းကားတစ်စီးပိုင်ရှင်များနှင့်လူလိုအပ်ချက်အတွက်ငှားရမ်းခြင်းန်ဆောင်မှုများဖြည့်ဆည်းရန်။ ဒါဟာအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်နှစ်ခုကိုအဓိကနည်းလမ်းများကိုပိုင်ရှင်စာရင်းမိမိတို့အမော်တော်ယာဉ်များနှင့်အသုံးပြုသူများကဖန်တီးအကောင့်အသစ်များကိုငှားရမ်း။
လိုအပ်နေသောကားမှာမိသားစုများအတွက်အထီး? ကားအသစ္ေတြကိုေမြို့လွဲ? သို့မဟုတ် ၄ ဘီးမောင်းဖို့ခရီးစဉ်အကျယ်ဆွဲဆောင်မှုတိုင်းပြည်အတွက်? ချီရှိပါတယ်ပြည်တွင်းဖြစ်ပိုင်ဆိုင်သောကားများ၏အားလုံးအမျိုးအစားများစာရင်းနှင့်အတူတစ်ကားငှားကလပ်။ ဒီဖန်ဆင်းတော်မူပြီကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်လူတိုင်းအတွက်၊နိုင်ငံခြားဧည့်သည်များနှင့်ဒေသခံများရောနှောဖို့အငွားကားလို၊သွားလေရာရာ၌သူတို့အလိုက၊ကနေအသိုင်းအဝိုင်းများ၏ဒေသခံကားပိုင်ရှင်။
တစ်ကားငှားထွက်ကိုခံစားမြောက်မြားစွာအကျိုးခံစားခွင့်ထိုကဲ့သို့သောဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်း၊ဤအောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။။။ဖြစ်စေမည်အပိုဝင်ငွေ။ သင်ရှိသည်ပိုပြီးထိန်းချုပ်ကျော်ကုန်ကျပါသည်။ သင်သည်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကစောင့်ရှောက်ကူညီရင်းသင့်ကားတက်ကြွအစဉ်အမြဲ။ ဒါဟာသင်ပေးသည်အခွင့်အချေးငွေ၏အကူအညီ။
ရေးကားဝေမျှပလက်ဖောင်းကချိတ်ဆက်ပုဂ္ဂလိကကားပိုင်ရှင်နှင့်အတူ-ကားစိန္ေ။ နှင့်မအစဉ်အလာကားအငှား၊ဒီအအစစ်အမှန်အကျိုးခံစားခွင့်ကမ်းလှမ်းအသံုးျပဳသူမ်ား၏ဝေါဟာရများအတွက်အဆင်ပြေ၊တာဝန်ခံနှင့်ကားအမျိုးမျိုး။ သင်ယခုတစ်ကားငှားသောအကောင်းဆုံးဝတ်စုံသင့်ရဲ့အခါသမယမှာတစ်စျေးနှုန်းသင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်နှင့်ကိုက်။ ဒီတစ်နာရီအဘို့၊နေ့သို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်။